dhiri: tenga iyo 128gb microsoft surface pro 4 ine intel yemisoro m3 ye $ 749
Kuru Nhau & Ongororo CHETA: Tenga iyo 128GB Microsoft Surface Pro 4 ine Intel Core m3 ye $ 749
CHETA: Tenga iyo 128GB Microsoft Surface Pro 4 ine Intel Core m3 ye $ 749
Sevha 16.7% pane 128GB Surface Pro 4 kubva kuMicrosoft
Microsoft ine dhiri nyowani yeiyo yekupinda-chikamu vhezheni yeiyo Microsoft Surface Pro 4 piritsi. Iwe unogona ikozvino kutenga iyo 128GB modhi inofambiswa neiyo 6th Gen Intel Core m3, uye yakagadzirirwa 4GB ye RAM ye $ 749. Iyo i $ 150 kana 16.7% dhisikaundi kubva pane yakajairwa $ 899 mutengo. Iyo dhisikaundi inotanga nhasi uye inomhanya kusvika Nyamavhuvhu 12, kana kusvika zvigadzirwa zvehwendefa zvapera.
Kune avo vakakanganwa zvinotakurwa neSurface Pro munzira yehardware, piritsi racho rakagadzirwa neGorilla Girazi 4 yakachengetedzwa 12.3-inch kuratidza ine 1824 x 2736 resolution. Iyo microSD slot inowanikwa kune avo vanotsvaga yekuwedzera yekuchengetedza Bhatiri rinotsiviwa rinopa anosvika maawa mapfumbamwe ekutamba kwevhidhiyo. Iyo 8MP kamera inoshongedza seri kweslate, uye 5MP kumberi-yakatarisana snapper inotora selfies uye inobata hurukuro dzevhidhiyo. Uye usakanganwe iyo Surface Pen iyo inouya netafura kunze kwebhokisi.
Iine Type Type, yako Surface Pro 4 inova laptop. NeSurface Dock, iyo Surface Pro 4 inogona kugara pakombuta yako nezviteshi zvinowanika zviviri zvakakwirira-resolution skrini, keyboard uye. mbeva. Iine Windows 10 Pro yakaiswa, iyo Surface Pro 4 inova chinhu chakakosha kumba, muhofisi kana munzira.
Chibvumirano chinowanikwa chete muU.S. kubva kuMicrosoft Store. Iwe unogona kusvika ipapo nekukurumidza sewink nekudzvanya pane sourcelink.
mabviro: Microsoft kuburikidza WMPoweruser
Iphone 7 pamwe vs v20
akanakisa screen muchengeti weS21
Teerera yambiro iyi kana zvikasadaro unogona kubirwa bofu
Spotify Premium Mhuri chirongwa chinowedzeredzwa neyakareba-chakakumbirwa chimiro
BlackBerry yadzoka! New 5G foni ine QWERTY keyboard inosvika muna 2021
Samsung Galaxy S5 vs Samsung Galaxy Cherechedzo 3